बुद्धशान्तिमा जारी भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि वडा नं.३ को हातमा – झुल्केघाम
बुद्धशान्तिमा जारी भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि वडा नं.३ को हातमा
चैत्र ८ ०५:५८ १८५
बुद्धशान्ति, चैत ०८। झापाको बुद्धशान्तिमा जारी प्रथम उपाध्यक्ष कप नकआउट भलिवल प्रतियोगिताको उपाधि वडा नम्बर ३ ले हात पारेको छ ।
चैत्र ३ गतेबाट बुद्धशान्ति–४ स्थित बर्ने चिया कमानको खेल मैदानमा सञ्चालित प्रतियोगिताको शनिबार फाइनल खेलमा वडा नम्बर ४ (बी) लाई हराउँदै वडा न ३ ले उपाधी चुम्न सफल भएको हो।
वेष्ट अफ फाइभ) को फाइनल खेलमा वडा न. ३ ले २५-१९, २५-१६ र २५-७ को सेटमा हराउँदैं उपाधि माथि कब्जा जमाएको हो । पहिलो र दोस्रो सेट आफ्नो पक्षमा पारेको वडा न.४ (बि) ले त्यसपछि आफ्नो लय गुमाउँदा ३ नं. वडाले भरपुर सदुपयोग गर्दै गुमाउन लागेको उपाधि आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।
फाइनल खेल अत्यन्तै रोमाञ्चक र हेर्न लायक प्रतिस्पर्धाले दर्शकलाई खुवै मनोरञ्जन दिएको थियो । फाइनल खेलको बेष्ट लिफ्टर विजेता टोलीका सुरेश दाहाल, वेष्ट ब्लकर मनोज अधिकारी, वेष्ट सटर रोशन बाँनिया, बेष्ट डिफेन्स उप–विजेता टोलीका पुजन लिम्बू र खेलको सर्वोउत्कृष्ट खेलाडीमा उप–विजेता टोलीका विपिन मोते घोषित भए । उनीहरुलाई नगद सहित प्रमाण–पत्र वितरण गरिएको छ ।
बिजेता टोलीले नगद ३० हजार रुपैयाँ सहित ट्रफि प्रमाण–पत्र प्राप्त गर्यो भने उप–विजेता टोलीले नगद १५ हजार रुपैयाँ ट्रफि,प्रमाण–पत्रमा चित्त बुझाएको छ । विजेता तथा उप–विजेता टोलीलाई बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश कुमार भुजेल र उपाध्यक्ष मीरा भुर्तेलले वितरण गरे ।
आगामी चैत्र १२ गते देखि प्रथम अध्यक्ष वडास्तरिय फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।